Waa maxay kala-goyntu, sida ay u shaqeyso, khuraafaadka iyo runta | Ragga Stylish
Jarmal Portillo | | Ku habboon, Fitness
Xaqiiqdii waligaa waad maqashay koronto-dhalinta adduunka ciyaaraha. Waa farsamo loo isticmaalo dhinaca jimicsiga iyo bilicsanaanta. Waxaa jira khuraafaad badan iyo run ku saabsan farsamadan oo ay ugu wacan tahay aqoon la'aan, been abuur ku saabsan internetka iyo guud ahaan macluumaad khaldan.
Qoraalkan waxaad ku awoodi doontaa inaad si qoto dheer u ogaato waxa electrostimulation-ku yahay, sida ay u shaqeyso iyo inay runti saameyn ku leedahay. Intaas waxaa sii dheer, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato khuraafaadka aadka loo sheegay iyo runta ee shabakadaha. Kaliya waa inaad sii wadataa aqrinta 🙂
1 Waa maxay electrostimulation
2 Saamaynta muuqda
3.1 Caafimaad qab marka aad fadhidid guriga
3.2 Uma baahnid inaad qaab yeelatid si aad u isticmaasho
3.3 Miisaanka ayaa lumay
Waa maxay electrostimulation
Waa farsamo adeegsata kicinta korantada si ay u keento murqo xanuun. Sidan oo kale, isku day ayaa la sameeyaa si loo abuuro saameyn la mid ah tan lagu helo iyadoo la sameynayo jimicsi murqaha ah. Sidaa darteed waxaa loogu talagalay in lagu kasbado murqaha ama qoob-ka-ciyaarka iyada oo aan loo baahnayn in lagu maro jimicsiga, dhididka oo xanuunsado dhowr saacadood maalintii.
Adduunyada bilicsanaanta, farsamadan waxaa loo isticmaalaa daaweynta khafiifinta, in kasta oo aan jimicsi jir ahaaneed aysan wax saameyn ah lahayn. Waa hab xoogaa jimicsi jimicsi ah oo kuu oggolaanaya inaad kordhiso murqaha muruqyada oo aad hagaajiso jilicsanaanta. Intaa waxaa dheer, waxay kordhisaa mugga, xoogga iyo adkeysiga.
Markii aan ka hadlayno soo-qaadista korantada waa inaan haysanno xoogaa fikrado ah si aan ugu dhicin dhibaato la mid ah tan inteeda badan. Farsamadan ayaa kaliya kuu ogolaaneysa inaad la shaqeyso hal muruq markiiba isla markaana aad lumiso dufanka waa inaad sameysaa jimicsiyo abaabulaya kooxo badan oo muruq ah. Waa run in electrostimulation Nicmooyinku ka shaqeeyaan tiro badan oo fiilooyin ah. Si kastaba ha noqotee, kuligood waa muruq isku mid ah. Kama shaqeyso jilibka ama kala-goysyada, sidaa darteed waxtarkeedu sidaas uma fiicna.
Ma jiraan wax tuuryo fudud oo qaab lagu qaabeeyo. Waa lagama maarmaan in la isku daro dhaqdhaqaaqa muruqyada, muruqyada iyo kala-goysyada isla waqtigaas. Intaas waxaa sii dheer, jidhku wuxuu wanaajiyaa oo keliya marka loo geeyo dadaal waana inuu kobocaa oo uu waxtar yeeshaa si uu mar labaad uga gudbo dadaalkaas.
Markii aan adeegsanno farsamadan oo aan ku qasanno cunno caafimaad leh, waxaan arki karnaa hoos u dhaca dufanka iyo kordhinta murqaha. Dufanku wuu ka miisaan yar yahay muruqa, markaa waxaan ku kordhin doonnaa kiilookeenna qaab caafimaad leh.
Dhanka kale, markaan isticmaalno electrostimulation wuxuu leeyahay xoogaa diidmo ah. Waxa ugu horeeya ayaa ah marka la isticmaalayo koronto, ma isticmaali karaan dadka wadnaha wadnaha ku shaqeeya. Sidoo kale laguguma talin karo kuwa ka cabanaya suuxdinta ama ku dheji caloosha haweenka uurka leh. Haddii aan si sax ah loo isticmaalin waxay dhaawici kartaa ama miiqaayaan muruqyada muruqyada.
Waxaa jira qalab loogu talagalay farsamadan noocyo badan iyo qiimayaal. Iibiyeyaasha ugu fiican ayaa loogu talagalay Wax alaab ah lama helin., lixda xirmo ee caanka ah.
kuwa kale Wax alaab ah lama helin.Waxay la qabsan karaan caloosha, laabta iyo xitaa lugaha. Sidoo kale lagu iibiyay xirmada oo dhameystiran si loo helo taam iyo waxqabad fiican.
Way fiicantahay in lagu ilaaliyo qalabka koronto-dhaliyaha a gel tabinta ee koronto.
Sida horeyba loo ogaa, farsamooyinka noocan ah ee hagaajiya jirkaaga waxaa jira khuraafaad badan. Waxaan dooneynaa inaan midwalba lafagurno oo aan beenino.
Caafimaad qab marka aad fadhidid guriga
Waa run in markaan dhaqaajino kororka korantada, dhaqdhaqaaqa wuxuu ku sii kordhayaa jirka oo dhan. Tani waxay dhaqaajineysaa dheef-shiid kiimikaadkeena, gubida tiro kalooriyaal ah waxayna soo saartaa testosterone. Si kastaba ha noqotee, in kaliya guriga aad ku kori doonto run maahan. Kicin ayaa loo baahan yahay si loo caawiyo hagaajinta waxtarka farsamada.
Aad ayey muhiim u tahay in dhaqdhaqaaqa la sameeyo ha ku dhicin saameyn been ah. Inta badan dadka adeegsada farsamadan waxay la qabsadaan nolol maalmeed iyagoo kuxiran macaashka ama qasaaraha aad raadineyso.
Uma baahnid inaad qaab yeelatid si aad u isticmaasho
Halkan waxaan ku dhacaynaa sheeko kale. Tani maahan sidaas. Haddii qofku ku dhaco shaqo xoog leh, waa inuu leeyahay ugu yaraan xaalad jireed. Ka gaabinta inaad sidaas sameyso waxay kordhin doontaa halista dhaawaca iyo dhibaatooyinka caafimaad. Waa muhiim inaad jir ahaan u diyaarsan tahay inaad adeegsato farsamadan. Intaas waxaa sii dheer, waa lagama maarmaan in jirka si fiican loo qoyo.
Kaliya kulan 20 daqiiqo ah, biyo badan ayaa lumi kara. Waxa jira dad 10 daqiiqadood gudahood marka jaakada haysata ay mar hore codsadaan in laga saaro. Tani waa sababta oo ah waa dadaal aad u weyn waxaadna u baahan tahay ugu yaraan xaalad jireed. Laguma talin in la isticmaalo mashiinka iyada oo aan la helin caawimaad xirfadle ah.
Waa mashiin ka caawiya sidii jir ahaan loogu diyaarin lahaa qofka. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah inuu jiro qof garanaya sida loo qiimeeyo xaaladaha jireed ee isticmaalaha iyo qiimeynta awoodda ay leeyihiin. Sidan oo kaliya ayaa lagu ogaan karaa inta uu le'eg yahay xoogga qof walba lagu qasbi karo.
Miisaanka ayaa lumay
Waa run inaad miisaanka iska dhimi karto adiga oo isticmaalaya koronto-dhaliyaha. Si kastaba ha noqotee, adigu iskama lumineysid culeyska. Sida jimicsi kasta oo kale, haddii aad ku weheliso cunto fiican, horumarkaagu wuu kordhayaa.
Markaad cuntada qaadaneyso, haddii aadan jimicsi sameynin abuurista yaraanta kalooriga ma noqon doonto mid waxtar leh. Haddii aan sameeyno cagsigeeda, sidaas oo kale ayey u dhaceysaa. Jimicsigu wuxuu naga caawinayaa inaan gubno kalooriyo badan, laakiin haddii aynaan wax badan ka cunin, kuma filna in la gubo baruurta.
Maaddaama ay tahay jimicsi xoog leh, waa caadi in la bilaabo dufanka lumay haddii aan ku wehelino cunno kalooriye-yar. Waxa jimicsiyadan sida aadka ah looga dareemi karo waa sida jirku u sameysmay. Markaad aragto natiijooyinka xilli hore, waxay caan ku noqotay ciyaartooyda adduunka oo idil. Gaar ahaan dadkaas oo aan dan ka lahayn inay ku jiraan qaab, laakiin kaliya doonaya inay muujiyaan jir wanaagsan.
Hadda waxaan u dhaqaaqeynaa inaan falanqeyno runta ku saabsan ku dhaqanka farsamadan. Midka koowaad ayaa ah waxay noo ogolaaneysaa inaan qabanno jimicsiyo badan oo bartilmaameed ah. Waxaan xasuusan nahay in electrostimulation-ku uu si fiican u shaqeeyo marka uu shaqeynayo kaliya hal koox oo muruq ah. Sidaa darteed, waa wax aad u wanaagsan in diirada la saaro foorarsiga ama kordhinta murqaha meel gaar ah. Haddii, tusaale ahaan, aan ku jirno qolka jimicsiga laakiin aan helin qaybo ku filan, waxaan ku caawin karnaa nafteena farsamadan si kor loogu qaado jimicsiga aaggan.
Runta kale ayaa ah taas Maaha mashiin maalin kasta la isticmaalo. Markii aan ku jirno tababar heerkan ah, waxay dhaqaaqaysaa in ka badan 400 muruq. Sidaad filan karto, xoogga jimicsigan wuxuu jirkeenna ka dhigayaa mid u baahan nasasho. Ujeeddadu waa in la sameeyo saddex kalfadhi oo toddobaadle ah. Had iyo jeer way kafiican tahay in takhasus takhasus leh uu kugula taliyo.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aan kaa caawin karo inaad tijaabiso koronto-dhalinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Waa maxay electrostimulation, sida ay u shaqeyso, khuraafaadka iyo runta